Yaalii Fonqolcha Mootummaa: Abbaan Alangee qorannoo xumuruun himannaa eegalufi - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsYaalii Fonqolcha Mootummaa: Abbaan Alangee qorannoo xumuruun himannaa eegalufi
Ob Juulaan kana booda WBO irraa akka dhaabbatan abdii qabna. Warri OPDO kun silas warra isaan qalu waliin shubbisan!!
(bbcafaanoromoo)—Qorannoon ajjeechaa A.L.I Waxabajjii 15 2011 magaalaa Baahirdaariifi Finfinnee raawwate xumuramee himata yakkaa banuf akka jiru Abbaan Alangee Waliigalaa Itoophiyaa beeksise.
Abbaan Alangee Waliigalaa Obbo Birhaanu Tsaggaaye ibsa har’a kennaniin Itaamaajor Shuumii Itti – aanaa Janaraal Birhaanuu Juulaa ajjeesuf yaadni akka turellee ibsaniiru.
Ajjeechaa waggaa darbe raawwaten Itaamaajor Shuumii Waraana Itoophiyaa Janaraal Sa’aara Mokonniin, Pirezidantii Naannoo Amaaraa Dr Ambaachaw Mokonniin dabalatee qondaaltota shanitu ajjeefame.
Shakkamtoota Baahirdaaritti qabaman 55 fi kan Finfinneedhaa qabaman 13 namoota yakka ajjeechaa angawoota mootummaa fi ajajoota waraanaan mana murtii dhiyaatan ta’uunis beekkameera.
‘Aanga’oota mootummaa biroo ajjeesuufis karoorri ture’
Kana malees shakkamtoota magaalaa Baahirdaar keessatti qabaman keessaa 45 yakki isaanii salphaa waan ta’eef gara ragaatti akka jijjiiraman ta’eera jechuun dubbatan.
Kunneen magaala Finfinnee keessatti to’annoo jala oolanii turan 140 keessaa 61 immoo wabiidhaan akka gadi lakkifaman himan.
Qaamoleen nageenyaa magaaloota lamaan keessatti gochicha fashalsuuf hojjetanis miidhaan du’aa fi qaamaa irratti akka qaqqabe ibsan.
Guyyaaa yakkichi itti raawwatamettis BJ Asaamminaw Tsigee fi Shaambal Mammaar Geetinnat namoota biroo fi miseensota Poolisii Addaa Naannoo Amaaraa walin ta’uun gara waajjira Pirezidantii naannichaa imaluu isaanii himan.
Haaluma walfakkaatun humni poolisii addaa naannichaa waajjira ADP, manneen ajajoota poolisii fi qe’ee simannaa keessummaatti tarkaanfiwwan garaagaraa fudhachuu isaanii himan.
Haleellaa Waxabajjii 15 kanaanis namootni 15 yommuu du’an digdama kan ta’an madaa’aniiru jedhan.
Adeemsa qorannoo keessattis meshaaleen waraanaa kilaashii dhibbaa ol ta’an irratti qorannoon taasifamuutu himame.